Clinical Nurse Ochwepheshe Job Description / Isibopho Sample Futhi Imisebenzi – JobDescriptionSample.org
Ikhaya / Ukukhangisa / Clinical Nurse Ochwepheshe Job Description / Isibopho Sample Futhi Imisebenzi
Clinical Nurse Ochwepheshe Job Description / Isibopho Sample Futhi Imisebenzi
superadmin Juni 28, 2016 Ukukhangisa 1 Phawula 407 Ukubukwa
Uhlelo, eyinhloko, noma ezixhumanisa umsebenzi nesineke-ukunakekelwa nsuku zonke ngendlela umkhuba emtholampilo. Qinisekisa ukunamathela ukuba izindlela zokuhlola ezasungulwa izinqubomgomo yesayensi, zamaphrojekthi, nezimfuneko nenqubo.
Ukuqondanisa noma ukuziphatha izinhlelo ezifundisayo noma ukuqeqeshwa inservice amaseshini ngezihloko isibonelo izinqubo zesayensi.
Isaziso, inkhulumoluhlolo, futhi ukucacisa abanale nkinga ukuba aqaphele nezidingo ukunakekelwa.
Kala ukusebenza kanye izinga asebekhulile umsebenzi noma iqembu izinhlelo.
Yethula ethile ngqo inpatients ngaphakathi akhethiwe ezikhethekile ezifana Oncology, Neurology, zokubelethisa, noma ukwelashwa.
Ukusekela izinhlelo okudayisa, izindlela, izifiso, noma izidingo zokunqanda izifo.
Hlanganyela ezengeziwe ukunakekelwa kwezempilo buhle kanye nezinkampani ukuqiniseka enhle nesineke-ukunakekelwa.
Thuthukisa imibono inkampani ibele, imigomo, izinqubomgomo, amaphuzu, noma izindlela.
Zuza, isicelo, noma cabanga nenqubo ukuqeqeshwa sokunakekela indawo ezikhethekile ezifana ngokwesibonelo Pediatrics, anakekele ukuthi sibi , futhi asebekhule.
Zuza noma ukusiza abanye-ukuthuthukiswa ukunakekelwa zokwelapha amalimi.
Yenza amathiphu yesayensi kwamanye amasevisi ukunakekelwa ngezokwelashwa, odokotela, amafemu umshwalense, abanale nkinga, noma ukunakekelwa ejensi yezokwelapha.
Uhlelo, ukuhlola, noma ukuguqula ukwelashwa amaphakheji predicated ku ulwazi etholakale ucabangela amarekhodi nesineke, noma ngokukhetha futhi ngokubona abanale nkinga.
abathengi yamanje kokuba amaqiniso kwakudingeka ngenze ukunakekelwa kwezempilo kanye therapy izinqumo onolwazi.
Ukweluleka izisebenzi zezokwelapha ezindaweni ezifana luhlolo, intuthuko, ukuhumusha kanye nokuhlaziywa imisebenzi, ukugula, ukukhubazeka, ubuchwepheshe, noma izimpahla.
wezokwelapha abasebenzi ukwelashwa ngokushesha noma ukuqapha ngaphakathi supply yokwelapha ngamakhambi ngabanye.
Bona imfundo izifiso noma akhiphe Amazing izintshumayelo abasebenzi okungukuthi abafundi kwezempilo noma abancelisayo.
Funda izincwadi ezikhona, ukukhuluma nozakwethu, noma ahileleke yesigodi noma uchwepheshe corporations ukugcina ukwaziswa ngcono kwezobuhlengikazi.
Gada noma uhlolisise izimo zezempilo amaklayenti emzamweni nabanye ochwepheshe ukunakekelwa kwezempilo.
Bamba iqhaza lokuqeqeshwa ezifana isibonelo ngokuhlola nesikhathi, kucwaninga Imininingwane ngabanye, critiquing yezifiso, futhi ngigcine olawula Ochwepheshe.
Yenza ukukhululwa uhlela amaklayenti.
Yenza ama-akhawunti ukuze ufake abanale nkinga’ anakekele izenzo.
Dala oda sokunakekela.
Supply kokubonisana ukunakekelwa kwezempilo nabathengisi ezahlukene ezindaweni kuhlanganise nesiguli ukuqeda, ukunakekelwa nesineke, noma izinqubo zokwelapha.
Zuza kanye nokugcina iziqondiso yomnyango, ukwelashwa, izifiso, noma amazinga ukunakekelwa nesineke esekelwe amathiphu omlandelayo esekelwe kucwaningo noma umbono Uchwepheshe.
Isitayela ukuhlaziywa kwezicelo mayelana iyasiza futhi omuhle kakhulu ibele umsebenzi noma amadivayisi eqinile.
Isakhiwo izinhlelo nesineke-imfundo kuhlanganise imininingwane okudingekayo ukuze senze izinqumo yokwelapha, ukunakekelwa ngezokwelashwa onolwazi.
Ukuhola ubuhlengikazi division ukusetha, noma kokuvumelana nge, isitifiketi noma zokulawula izinqubo.
amakomiti Couch noma emikhakheni yezokwelapha.
Active-Listening-Providing whole awareness of what other folks are currently saying, using time and energy to understand the factors being made, nezindaba ngizibuza njengoba enhle, and not mesmerizing at improper situations.
Ukuxhumana-Ukuxoxa nabanye ukubalula Imininingwane ngempumelelo.
Thinking that is critical-Using judgement and reason to spot the benefits and disadvantages of choice alternatives, imibono noma izindlela izinkinga.
Monitoring-TrackingANDDiscovering performance of companies, abantu ezahlukene, or oneself take corrective action or to create improvements.
Ukufundisa-ibayala abanye indlela-ukuthatha isinyathelo.
imikhiqizo Isitolimende-Ifaka, onobuhle, cabling, or programs to fulfill specs.
Ukusebenza izinkomba Monitoring zokubuka, dials, or other indicators to be sure an appliance is currently operating appropriately.
Quality-Control Ukuhlaziya-Ukuphelelisa ukuhlolwa nokuhlolisisa izinto, izinkampani, noma imisebenzi ukuhlola ukusebenza noma izinga.
Systems Analysis-Determining what sort of process should perform and just how improvements in operations, izinkinga, along with the setting will impact benefits.
Methods Analysis-Distinguishing procedures or signals of system performance along with right or the behavior needed seriously to increase functionality, ngokuhlobene imigomo zedivayisi.
Operations of Savings-Identifying how money will soon be invested to have the work done, futhi yokuthengisa lezi izindleko.
Operations of Product Sources-Seeing and getting towards the proper usage of features, amadivayisi, and supplies needed to do specific work.
Operations of Personnel Resources-Building motivating, and directing folks as they they work, ukukhomba abantu okungcono kakhulu umsebenzi.
Ngokuhamba 2 iminyaka, kuze futhi kubandakanya 4 iminyaka
Jobe Ukuphathwa Amakhono Udinga
ukuzimisela – %
Inkinga mayelana Abanye – %
Umumo Cultural – %
Gxila Yokuxhumana – %